डा....खाते बालबालिकाका लागि सन्देशमूलक चलचित्र हो : निर्माता रोशनी केसी - Medianp
डा….खाते बालबालिकाका लागि सन्देशमूलक चलचित्र हो : निर्माता रोशनी केसी
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०५, २०७४१२:०९0
काठमाडौं, ५ साउन । शुक्रबार (६ साउन) देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘डा…खाते’ चलचित्रकी निर्माता हुन् रोशनी केसी । चलचित्रमा रोशनी आफूले पनि अभिनय गरेकी छन् । दुई वर्षअघि निर्माण भएर पनि डा….खाते हलहरूमा डेट नपाएकै कारण अलि ढिला भएको हो । त्यसमा पनि निर्देशक रवि अर्याल अमेरिका भासिएपछि रोशनीकै काँधमा आएको छ चलचित्र प्रोमोसनदेखि प्रचार प्रसारको जिम्मा । शुक्रबारदेखि राजधानीसहित विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमा आउन लागेको डा….खाते चलचित्रबारे निर्माता रोशनी केसीसँगको कुराकानी :
० चलचित्र डा….खाते को रिलिज अलि ढिला भएन र ?
– केही ढिलाइ भएको हो । मेरा लागि यतिबेला डा..खाते रिलिज गर्नु भनेको प्रसव वेदनाबाट एउटा सन्तान जन्माउनुजस्तै हो । तथापि दर्शकलाई मन पर्ने चलचित्र मैले निर्माण गरेकाले दर्शकसम्म डा…खाते पुर्‍याउन सबै प्रकारका समस्या भुलेर म प्रदर्शनीको दौडधूपमा छु । यही साउन ६ गतेदेखि दर्शकहरूले डा….खाते हेर्न पाउनु हुनेछ ।
० निर्देशक नहुँदा कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ प्रचार प्रसारमा ?
– चलचित्र निर्देशन गरेपछि त्यसको रिलिज गर्नु निर्देशकको दायित्व हो । निर्देशक नेपालमा हुनु हुन्न । त्यही भएर मैले नै चौतर्फी हेर्नु परेको छ । एक्लै हेर्नुपर्दा साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ । चलचित्र प्रदर्शन गर्न हल मिलाउने, प्रचारप्रसारको व्यवस्थापनदेखि पोस्टर कहाँकहाँ टाँसिएको छ वा छैन भन्नेसम्म पनि आफैंले हेर्नुपर्ने अवस्थामा छु । चलचित्र निर्माण गर्न सजिलो भए पनि त्यसलाई प्रदर्शनी गर्न निकै कठिन हुने रहेछ । जुन कुरा मैले डा…खाते बनाउँदा भोगेकी छु ।
० डा…खाते कस्तो प्रकारको चलचित्र हो ?
– यो सडक बालबालिकाको कथावस्तुलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको यथार्थवादी चलचित्र हो । जुन घटना हाम्रा आँखाका दिनहुँ देखिने गरेका छन्, त्यही विषयलाइृ डा…खातेमा देखाउने प्रयास गरिएको छ । चलचित्र निकै राम्रो बनेको छ । बालबालिकाका लागि मात्रै होइन, समाजका प्रतिष्ठित र बुद्धिजीवी वर्गले पनि चलचित्र मन पराउँछन् भन्ने आशा गरेकी छु । डा…खाते सन्देशमूलक चलचित्र हो । आफ्ना सन्तानलाई कसरी उज्ज्वल भविष्यका लागि सही मार्गमा लैजाने भन्ने सन्देश यो चलचित्रले अभिभावकलाई दिने छ । बालबालिकहरूले पनि आफू कसरी सफल र असफल हुने भन्ने कुरा यस चलचित्रबाट सिक्नेछन् ।
० अन्य के छ डा…खातेमा ?
– चलचित्रमा सम्राट सापकोटा, शिल्पा पोखरेलको अभिनय रहेको छ । पाल्पा जिल्लाका रमणीय स्थलका साथै काठमाडौंमा चलचित्र सुटिङ गरिएको छ । डा…खातेको टाइटल गीत योगेश्वर अमात्यले गाउनु भएको छ । जुन निकै लोकप्रिय बनेको छ ।
यसरी बढ्दैछ नेपाल प्रहरीमा शक्ति राष्ट्रको चलखेल